နိုင်ငံတဝန်း ဆန္ဒပြမှုများ နှင့် ကုန်ထုတ်မှု နည်းပါးလာခြင်းကြောင့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်ဈေးများ မြင့်တက်မှုရှိလာ - People Media Myanmar
Home နိုင်ငံတဝန်း ဆန္ဒပြမှုများ နှင့် ကုန်ထုတ်မှု နည်းပါးလာခြင်းကြောင့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်ဈေးများ မြင့်တက်မှုရှိလာ
နိုင်ငံတဝန်း ဆန္ဒပြမှုများ နှင့် ကုန်ထုတ်မှု နည်းပါးလာခြင်းကြောင့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်ဈေးများ မြင့်တက်မှုရှိလာ
PUBLISHED - March 6, 2021
ရနျကုနျ ၊ မတျ ၆ (PeopleMedia)
နိုငျငံတဝနျး ဆန်ဒပွမှုမြားဆကျလကျရှိနကော ကုနျထုတျလုပျမှု နှငျ့ ကုနျစညျစီးဆငျးမှုမြား နညျးပါးခွငျးကွောငျ့ အခွခေံ စားသောကျကုနျဈေးမြား မွငျ့တကျမှုရှိလာကွောငျး အခွခေံဈေးကှကျအတှငျးမှ သိရသညျ။
ယခငျက ကပြျ ၃၅၀၀၀ တနျ ဆနျတဈအိတျလြှငျ ကပြျ ၄၂၀၀၀ အထိ မွငျ့တကျလာပွီး တဈပိသာ ကပြျ ၂၄၀၀ တနျ စားအုနျဆီသညျ ကပြျ ၃၃၀၀ အထိ မွငျ့တကျလာပွီး အခွားသော စားသောကျကုနျမြားပါ မွငျ့တကျခွငျးဖွဈသညျ။
” အရငျ ကိုဗဈမဖွဈခငျကတော့ အဈမတို့စားတဲ့ ပေါျဆနျးမှှေးဆနျဆိုရငျ တဈအိတျကို ၄၂၀၀၀ လောကျအထိပဲပေးရတယျ အခု ကတြော့ အဈမ ခါတိုငျးက စားနတေဲ့ ဆနျကိုပဲ ၄၉၀၀၀ လောကျကို ပေးရတယျ ကိုဗဈကွီးဖွဈတုနျးက အဲ့ဒီလောကျ အထိမဖွဈခဲ့ အခုမှ တကျတာ ” ဟု ဒဂုံအရှေ့မွို့နယျရှိ အိမျရှငျမ တဈဦးဖွဈသညျ့ ဒေါျကွညျညှနျ့က ပွောသညျ။
လကျရှိတှငျ ဒသေံသရ အမိနျ့မြားကို ထုတျပွနျထားသညျ့အတှကျလဲ ကုနျစညျစီးဆငျးမှုမြား နှောငျနှေးကွနျ့ကွာစပွေီး ကုနျစိမျး နှငျ့ သားငါးမြား သယျယူရာတှငျ ပို့ဆောငျရေးအတှကျလဲ အခကျအခဲမြားဖွဈပေါျစကွေောငျး ရနျကုနျ ပုသိမျ ကုနျစညျပို့ဆောငျရေး ယာဉျပိုငျရှငျ တခြို့က ဆိုသညျ။
” ကုနျစညျက ဘာမှကို ပို့လို့မရသေးတာ ကုနျစိမျးက ပို့တဲ့အခါမှာ အခြိနျ နဲ့ ပို့ရတာ အခြိနျလှနျသှားရငျ ဘာမှ လုပျမရတ. အပကြျအစီး ရှိရငျလဲ ပွနျရောျရတာတှလေဲရှိတော့ ကုနျစိမျးပို့ဆောငျရေးက အတောျကို အခကျအခဲဖွဈနတော”ဟု ကုနျစညျပို့ဆောငျရေး ယာဉျပိုငျရှငျ ဦးပွညျ့စုံဦး ကပွောသညျ။
လကျရှိ အခွခေံ ဈေးမြားတှငျ CDM လှုပျရှားမှုအနဖွေငျ့ ဈေးမြားကို နှဈပတျခနျ့ပိတျမညျဟု သတငျးမြားကွောငျ့ ဈေးမြားတှငျ အခွခေံစားသောကျကုနျမြား ဝယျယူစုဆောငျးမှုမြားပွားနကွေောငျး သိရသညျ။
နိုငငြံတဝနြး ဆနျဒပှမှုမွား နှငြ့ ကုနထြုတမြှု နညြးပါးလာခှငြးကှောငြ့ အခှခေံ စားသောကကြုနဈြေးမွား မှငြ့တကမြှုရှိလာ
ရနကြုနြ ၊ မတြ ၆ (PeopleMedia)
နိုငငြံတဝနြး ဆနျဒပှမှုမွားဆကလြကရြှိနကော ကုနထြုတလြုပမြှု နှငြ့ ကုနစြညစြီးဆငြးမှုမွား နညြးပါးခှငြးကှောငြ့ အခှခေံ စားသောကကြုနဈြေးမွား မှငြ့တကမြှုရှိလာကှောငြး အခှခေံဈေးကှကအြတှငြးမှ သိရသညြ။
ယခငကြ ကပွြ ၃၅၀၀၀ တနြ ဆနတြဈအိတလြွှငြ ကပွြ ၄၂၀၀၀ အထိ မှငြ့တကလြာပှီး တဈပိသာ ကပွြ ၂၄၀၀ တနြ စားအုနဆြီသညြ ကပွြ ၃၃၀၀ အထိ မှငြ့တကလြာပှီး အခှားသော စားသောကကြုနမြွားပါ မှငြ့တကခြှငြးဖှဈသညြ။
” အရငြ ကိုဗဈမဖှဈခငကြတော့ အဈမတို့စားတဲ့ ပေါဆြနြးမှှေးဆနဆြိုရငြ တဈအိတကြို ၄၂၀၀၀ လောကအြထိပဲပေးရတယြ အခု ကတွော့ အဈမ ခါတိုငြးက စားနတေဲ့ ဆနကြိုပဲ ၄၉၀၀၀ လောကကြို ပေးရတယြ ကိုဗဈကှီးဖှဈတုနြးက အဲ့ဒီလောကြ အထိမဖှဈခဲ့ အခုမှ တကတြာ ” ဟု ဒဂုံအရှေ့မှို့နယရြှိ အိမရြှငမြ တဈဦးဖှဈသညြ့ ဒေါကြှညညြှနြ့က ပှောသညြ။
လကရြှိတှငြ ဒသေံသရ အမိနြ့မွားကို ထုတပြှနထြားသညြ့အတှကလြဲ ကုနစြညစြီးဆငြးမှုမွား နှောငနြှေးကှနြ့ကှာစပှေီး ကုနစြိမြး နှငြ့ သားငါးမွား သယယြူရာတှငြ ပို့ဆောငရြေးအတှကလြဲ အခကအြခဲမွားဖှဈပေါစြကှေောငြး ရနကြုနြ ပုသိမြ ကုနစြညပြို့ဆောငရြေး ယာဉပြိုငရြှငြ တခွို့က ဆိုသညြ။
” ကုနစြညကြ ဘာမှကို ပို့လို့မရသေးတာ ကုနစြိမြးက ပို့တဲ့အခါမှာ အခွိနြ နဲ့ ပို့ရတာ အခွိနလြှနသြှားရငြ ဘာမှ လုပမြရတ. အပကွအြစီး ရှိရငလြဲ ပှနရြောရြတာတှလေဲရှိတော့ ကုနစြိမြးပို့ဆောငရြေးက အတောကြို အခကအြခဲဖှဈနတော”ဟု ကုနစြညပြို့ဆောငရြေး ယာဉပြိုငရြှငြ ဦးပှညြ့စုံဦး ကပှောသညြ။
လကရြှိ အခှခေံ ဈေးမွားတှငြ CDM လှုပရြှားမှုအနဖှငြေ့ ဈေးမွားကို နှဈပတခြနြ့ပိတမြညဟြု သတငြးမွားကှောငြ့ ဈေးမွားတှငြ အခှခေံစားသောကကြုနမြွား ဝယယြူစုဆောငြးမှုမွားပှားနကှေောငြး သိရသညြ။
« မအူပင်မြို့ တရားရုံးမှ တရားရေးဝန်ထမ်း ၁၀ ဦး CDM လှုပ်ရှားမှု၌ ပါဝင်လာ
ပန်းဘဲတန်းမြို့ NLD ရပ်ကွက် ဥက္ကဋ္ဌ ကို တပ်နှင့်ရဲက မတ်လ (၆)ရက်နေ့ ည၌ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးနောက် သေဆုံးသွား »